トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Resona Visa ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
Isikweletu esingu yelangabi ephenduphendukayo Resona Visa ikhadi, zikhona izinkonzo amathathu cishe.
ribonucleic 1 ku iso fly kuyinto "ribonucleic epheshaneni", lesi yisikhathi ukwenza shopping esitolo, iyisevisi lapho ungakhetha credit ezikhanyisayo kuphela uma ucacise "in the credit ezikhanyisayo". Semali-sum lokukhokha noma ukukhokhelwa in izitolimende by lemali ukusetshenziswa imali, by ngokukhetha besebenzisa credit ezikhanyisayo, kungenzeka ukuba shopping sokuboshwa isikhathi esilingana yasendlini.
2 linye kuzo zonke ezinye izici, kulapho "ribonucleic kamuva". Lena isamba semali noma izitolimende ngesikhathi yezitolo, ngisho noma komnikazi ecacisa wenkokhelo iyisevisi zingaguqulwa zibe credit ezikhanyisayo kamuva. Ngaphezu inqubo ocingweni noma kwi-Inthanethi, ungakwazi ukushintsha kalula credit ezikhanyisayo.
Nokho, uma ucacise "ibhonasi 2 ukukhokhelwa isikhathi", njll Uma uke uyasho kakade ingxenye, ukushintsha ukuze udumo ezikhanyisayo endleleni ukuthi asikwazi ukuba. Ngaphezu kwalokho, njengoba kukhona kungenzeka ukuthi ayikwazi ukushintshwa kanye kuyomane uyakwazi ekushintsheni usuku olunqunyiwe, uzodinga ukusebenzisa ekuseni.
kunini isimemezelo ribonucleic
3 linye, kuyinto "kunini Declaration ribonucleic". Lena, ngisho noma ucacise isamba semali noma izitolimende ekhawunteni, iyisevisi ukuthi njalo iba zokukhokha ku-credit ezijikelezayo. Le sevisi ukuthi kungenziwa isethwe noma ukhansele nganoma yisiphi isikhathi, ungase uthande ukushintsha ngezikhathi ezithile ngokuhambisana, ezifana isimo sasendlini.
Futhi, ukuthi kungakhuphula senkokhelo noma imbuyiselo egcwele, isici "kunini Declaration ribonucleic". Ngokwesibonelo, uma umnikeza imali eyengeziwe, ezifana amabhonasi, by senkokhelo ukwanda, imbuyiselo egcwele, ungehlisa jikelele buyiselo nemali.
Resona Visa ikhadi ezikhanyisayo ye-credit yokukhokha
Resona Visa amakhadi, kuthiwa ukubuyiswa kwemali uhlelo lelungiselelwe, njengokuthi "Yebo dlala", kuba ifomu umsebenzisi ukhethe elinye isu ukubuyiswa kwemali Wena. Ngokuhamba yesikhashana, izinkokhelo zenyanga isethwe 10,000 yen, it is kwakuhlanganisa isilinganiso senzalo kuthunywa lokhu. Nokho, ukusetshenziswa ezikhanyisayo credit ne entsha, ukuze akhokhe lemali kanye nenani izinkokhelo zenyanga kuyahlukahluka, ake qaphela.
Isilinganiso sekhomishini credit ezikhanyisayo credit senzalo ikhomishana
Resona Visa ikhadi yelangabi ephenduphendukayo Resona Visa ikhadi kuyinto "eningi inani lenzalo yonyaka amaphesenti 15.0 ka." Uma kuqhathaniswa jikelele izinkampani ezezimali umthengi kanye ikhadi lesikweletu, ingabe kungashiwo ukuthi isilinganiso amanani ezinombolo.
inkomba | isithakazelo jikelele ezikhanyisayo yesikweletu (ikhomishini), zenzalo
senzalo Imali ukubala uye ibalwa ku "senzalo ka imali × senzalo". Ngokwesibonelo, uma axazulule le shopping 100,000 yen udumo yelangabi ephenduphendukayo Resona Visa ikhadi, kuyoba "100,000 yen × 15% = 115.000 yen". Ngamanye amazwi, kwakuzothatha 15,000 yen izimali ngonyaka owodwa kuleli cala. Uma isikhathi sokukhokha isikweletu siba hhayi ngaphansi konyaka owodwa, izimali kuyoba ezishibhile 15,000 yen. 000 Imali yen ngeke kungathatha. Uma isikhathi sokukhokha isikweletu siba hhayi ngaphansi konyaka owodwa, izimali kuyoba ezishibhile 15,000 yen. 000 Imali yen ngeke kungathatha. Uma isikhathi sokukhokha isikweletu siba hhayi ngaphansi konyaka owodwa, izimali kuyoba ezishibhile 15,000 yen.